-မင်းတပ်မြို့နယ်အတွင်းရှိ စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူများအတွက် NUG ၏ လူသားချင်း စာနာထောက်… – PVTV Myanmar
-မင်းတပ်မြို့နယ်အတွင်းရှိ စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူများအတွက် NUG ၏ လူသားချင်း စာနာထောက်…
· 8 months ago ·16 Comments
-မင်းတပ်မြို့နယ်အတွင်းရှိ စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူများအတွက် NUG ၏ လူသားချင်း စာနာထောက်ထားရေးနှင့် ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ဆေးဝါးနှင့်အစားအသောက်များ ပေးအပ်လှူဒါန်း
-စစ်ကောင်စီကျူးလွန်တဲ့ ပြစ်မှုတွေအတွက် ICJ နဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည်ဟု အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ သတင်းထုတ်ပြန်
-“မြန်မာနိုင်ငံတွင်း လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများအား တွန်းလှန်ခြင်း” ဆွေးနွေးပွဲစကားဝိုင်းသို့ NUG ဝန်ကြီးများ တက်ရောက်ဆွေးနွေး
-အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၊ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန က စီစဉ်ပို့ချခဲ့တဲ့ နောက်ဆုံးနှစ်အပိုင်း ခ ဆေးကျောင်းသား/သူများအတွက် online သင်တန်း ကို ကျောင်းသား/သူ ၂၀၀၀ ကျော် တက်ရောက် စတဲ့ PVTV ရဲ့ ညနေပိုင်းသတင်းအစီအစဉ်ကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Like – 5.7K Share – 522
ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ပြီး အချုပ်အခြာအာဏာကို ပြည်သူတွေထံ အပ်နှင်းနိုင်ရေး ကြိုးပမ်းလုပ်ဆောင်နေ တယ်လို့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ ကတိသစ္စာပြု
စစ်ရှောင်စခန်းများအတွက် ရေနှင့် သန့်ရှင်းရေးအကြောင်း သိကောင်းစရာ (အောက်တိုဘာလ၊ ၂
အကြမ်းဖက်စစ်တပ်က မနက်လင်းအားကြီး ၁ နာရီကျော်လောက်မှာ ဖရူဆိုစစ်ရှောင်စခန်းကို လေယာဉ်နဲ့ ဗုံးကြဲ၊ စစ်ရှောင် ၃ ဦး ဗုံးမှန်ပြီး ပွဲခြင်းပြီးသေဆုံးခဲ့ရ
Tin Mg Win says:
2021-05-31 at 9:03 PM
2021-05-31 at 9:04 PM
2021-05-31 at 9:05 PM
ဆညိးဆာေရာင္ ညေနခင္းထဲက က်ေနာ္ခ်စ္ေသာပန္းလိပ္ျပာငယ္ေလး says:
2021-05-31 at 9:16 PM
BU ZHI DAO says:
2021-05-31 at 9:44 PM
မင္းတပ္ထက္ပိုဆိုးေနတာ ကယားပါ ကယားက လွည္းတန္း တစ္ခြင္စာေလာက္ပဲ က်ယ္တာပါ ရန္ကုန္ကလာမယ္ဆို ( မိုးျပဲ ရွမ္းျပည္နယ္ ) လြိဳင္ေကာ္ ဒီေမာဆို ဖ႐ူဆို နမ္းဖဲ ေဘာလခဲ ဖားေဆာင္း ေမာ္ခ်ီး မယ္စဲ့ ဒါ တစ္လမ္းလုံးက ၿမိဳ့အကုန္ပါ
လြိဳင္ေကာ္ ဒီေမာဆို အကြာအေဝးက လွည္းတန္းနဲ႔ YU ေလာက္ပါပဲ နီးနီးေလးပါ ေန႔တိုင္း လက္နက္ႀကီးေတြနဲ႔ ထုခံေနရပါတယ္ ညဆိုလည္း မအိပ္ရပါဘူး ဒီေန႔ဆို ေလယာဥ္ေတြပါ အမ်ားႀကီးသုံးပါတယ္ စစ္ေဘးေရွာင္ေတြလည္း ဒီၿမိဳ့က်ဥ္းေလးထဲမွာ ပတ္ေျပးေနရတာပါ မလုံျခဳံပါဘူး
ဖားေဆာင္း ေမာ္ခ်ီၾကားမွာလည္း KNPP နဲ႔ စစ္ေခြးေတြ ခ်ေနပါေသးတယ္ ဟိုဘက္ေျပးမရ ဒီဘက္ေျပးမရ တစ္ျပည္နယ္လုံးကို ၂ ဖက္ပိတ္ထားတာပါ
ဒီေမာဆို ဖ႐ူဆို လမ္းၾကားက တံတားအဖ်က္ခံလိုက္ရေတာ့ ဘာရိကၡာေတြမွ သယ္မရပါဘူး ဆန္ၾကမ္း အိတ္အေသး ၁ အိတ္ကို ၇ ေသာင္းပါ နည္းနည္းေကာင္းတာဆို သိန္းေက်ာ္ေနပါတယ္ ပိုက္ဆံရွိလို့ ဝယ္ခ်င္ရင္ေတာင္ ဝယ္ရေတာ့ပါဘူး ဘယ္သူ႔ဆီမွာမ ဆန္မက်န္ေတာ့လို့ပါ အသီးအရြက္ အသားငါးဆို မျမင္ရတာၾကာေနပါၿပီ ဘူးသီးစိုက္တဲ့အိမ္ကလည္း တစ္လုံးကို 4500 နဲ႔ေရာင္းေနပါတယ္
ဓာတ္ဆီဆိုလည္း အကုန္ျပတ္ေနပါၿပီ တစ္ဆိုင္မွ ထည့္ဖို့ ဆီေတြ မက်န္ေတာ့လို့ပါ
ကယားဒီေလာက္ျဖစ္ေနတာ နည္းနည္းေတာင္မႂကြေပးနိုင္တဲ့ လူငယ္ေတြက ကယားကလူငယ္ေတြေလာက္ ေသြးမရဲၾကလို့လား
ေန႔တိုင္း ေသာက္စား ေပ်ာ္ပါးေနတာကို ပုံေတြ စြတ္တင္ေနတဲ့ လူေတြေရာ ? ဒီေတာ္လွန္ေရးအေၾကာင္းျပန္ေျပာရင္ လိပ္ျပာလုံနိုင္ရဲ့လား ?
Min Khaing Thaton says:
2021-05-31 at 9:48 PM
2021-05-31 at 10:52 PM
Hnaung Ei Khin says:
2021-05-31 at 11:55 PM
Yaw Han says:
2021-06-01 at 6:14 AM
Linn Zaw Htun says:
2021-06-01 at 9:01 AM
Pvtv သတင်းနားထောင်းရတာကို ကျက်သရေရှိတယ် နားဝင်ချိုတယ် ကျေးဇူးပါ pvtv
ဇင္ကုိလတ္ ျမင့္သိန္း says:
2021-06-01 at 2:20 PM
Ko Zaw Htet says:
2021-06-01 at 5:10 PM
2021-06-01 at 7:42 PM
Ayetin Tin says:
2021-06-02 at 9:03 PM
Great. အရေးတော်ပုံ အမြန်ဆုံး အောင်ရမည်
Ko Ko Ko says:
2021-06-04 at 7:03 PM
တစ်ပတ်အတွင်း မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက် (၃၁-၅-၂၁ မှ ၆-၆-၂၀၂၁)…
အနီထဲမှ ကြယ်ဖြူတစ်ပွင့် -‌ ဆောင်းပါး…